Vexel wuxuu bilaabay UltraCam Osprey 4.1 - Geofumadas
Luulyo, 2020 cadastre, Geospatial - GIS, GPS / Qalabka, Engineering, tabo cusub, dhowr
Sawirka Vexcel wuxuu shaaca ka qaadayaa sii deynta jiilka xiga ee UltraCam Osprey 4.1, qalab casri ah oo aad u balaaran oo loogu talagalay aruurinta isku mar ee sawirada nadir sawirada (PAN, RGB iyo NIR) iyo sawirada oblique (RGB). Cusbooneysiin joogto ah oo ku saabsan kala-guurka, dhawaqa-aan-lahayn, iyo metelaadaha dhijitaalka ah ee saxda ah ee adduunka ayaa muhiim u ah qorshaynta magaalada casriga ah. Awood u siinta wax ku qaadashada duulimaadyada duulimaadka aan horay loo arag oo leh tayo sare iyo tayo joomatari, UltraCam Osprey 4.1 waxay dejineysaa halbeeg cusub oo khariidaynta magaalooyinka iyo naqshadaynta magaalada 3D.
Hoggaaminta jiilka afraad ee dareenka sawirka UltraCam, Nidaamku wuxuu isku daraa muraayadaha dhaqanka cusub ee warshadaha, jiilka dambe ee CMOS dareemayaasha elektaroonigga ah iyo tuubbo heer caalami ah oo lagu farsameeyo sawirka si loo gaarsiiyo sawirada tayada aan horay loo arag, marka la eego xallinta faahfaahinta, caddeynta iyo firfircoonaanta ballaaran. . Nidaamku wuxuu ku qaataa wax soo saarka duulista heerar cusub, isagoo aruurinaya 1.1 Gigapixels 0.7 sekan kasta. Macaamiisha si dhakhso leh ayey u duuli karaan, waxay u daboolan karaan meelo badan, waxayna arki karaan faahfaahin dheeraad ah.
Qaabka cusub ee laqabsashada Codsiga La-qabsiga ee La-qabsiga (AMI) wuxuu magdhow siinayaa sawirro kala duwan oo dhaqdhaqaaq badan oo muuqaal ah, waxaana uu magdhaw ka bixiyaa kala-duwanaanshaha masaafada dhul-gariir ee sawirrada dhibbanaha ah si loo soo saaro sawirrada muuqaalka muuqda iyo muuqaalka aan horay loo arag.
Helitaanka ganacsi ee UltraCam Osprey 4.1 waxaa loo qorsheeyay horaanta 2021.
Marka lagu daro qaab nambar cusub - UltraCam Osprey 4.1 waa kamarad jiilka 4-aad ee noockeedii hore - jiilkan cusub wuxuu sidoo kale soo bandhigayaa dhowr cusbooneysiin naqshadeyn ah si loo kordhiyo fududeynta guud ee isticmaalka. Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah: madaxa kamaradu hoos u dhigay wuxuu fidiyaa xulashooyinka diyaaradeed xitaa diyaarado yaryar iyo muuqaalka muuqaalka la hagaajiyay wuxuu u oggolaanayaa fudfududaynta rakibaadda aan lahayn kaameeraha. Macaamiisha hadda waxay si sahlan ugu helayaan IMU iyo qalabka UltraNav, si loo beddelo UltraNav ama nidaam kale oo maareyn duulimaad ah oo goobta ah iyada oo aan loo baahnayn lacag dheeraad ah ka dib saarista IMU.
“UltraCam Osprey 4.1 waxaad kaheleysaa labo kamaradood hal guri. Nidaamku wuxuu fulinayaa baahiyo kala duwan oo isugu jira min khariidaynta magaalada illaa codsiyada khariidaynta dhaqameed ee duullimaadyada isku midka ah, ”ayuu yiri Alexander Wiechert, Madaxa Shirkadda Vexcel Imaging. Isla mar ahaantaana, waxaan si aad ah u kordhinay raad-raaca nadir illaa inka badan 20.000 pixels dhammaan duullimaadyada si aan u abuurno wax ku oolnimada aruurinta duulimaadka sida caadiga ah lagu gaaro oo keliya nidaamyada kamaradaha waaweyn.
Faahfaahinta furaha ah
Cabbirka sawirka PAN ee 20.544 x 14.016 pixels (nadir)
14,176 x 10,592 pixels cabirka midabka sawirka (oblique)
Dareemayaasha sawirka CMOS
Magdhowga Dhaqdhaqaaqa Sare (AMC)
1 gogolkiiba 0.7 sekan
Nidaamka lenska 80m ee PAN.
Nidaamka lenska midabka 120mm (Nidaamka RGB Bayer)
Post Previous" Hore Ku darista cusub ee taxanaha Machadka Bentley: Daabacaadda Gudaha MicroStation CONNECT Edition
Post Next Geopois.com - Waa maxay?Next »